Ruian Vidi Trading Co., Ltd. Ọ dị na Wenzhou City, Province Zhejiang. Ịzụ ahịa na njem dị mfe. Ụlọ ọrụ a na -agbasi mbọ ike imepụta na nyocha na mmepe nke akịrịka achara n'afọ niile. Nwee ahụmịhe miri emi na ndị ọrụ R&D. Nkwa dị mma, ezigbo mma na ọnụahịa ezi uche dị na ya. DarkElves 'na-agbasi mbọ ike inye ndị ọrụ ndị ọzọ ihe ọkụ ọkụ achara na-ere ọkụ, dị ọcha na gburugburu ebe obibi.
Ụlọ ọrụ a nwere usoro nrụpụta dị elu na sistemụ njikwa, nwere ike wepụta nnukwu akịrị bamboo nke na -ezute ịdị mma na obere oge.
Anyị ga-ewepụta nnukwu icheku ọkụ BBQ dị oke ọnụ ahịa kacha mma.
Anyị bụ ndị na -emepụta unyi BBQ Bamboo Briquette buferela na mba dị iche iche n'ụwa.
Ngwaahịa unyi niile dị na ngwo ngwo na -emezu ụkpụrụ ogo nke mbupụ.
Ụlọ ọrụ anyị dị na Wenzhou City, Province Zhejiang, China.
DarkElves na -elekwasị anya na imepụta ngwaahịa unyi unyi. N'ihi na elu nke unyi bamboo (700㎡/g) buru ibu karịa nke unyi (300㎡/g), ọkụ ngwo nke DarkElves bamboo karịrị okpukpu atọ nke unyi, oge ọkụ ya na -adịkwa ogologo.
DarkElves nwere ike kwụsie ike na oke okpomọkụ ogologo oge, yana o nwere akụkụ nke mineral achọrọ maka uto nke ndụ, ọ ga -abanyekwa n'ime nri n'oge a na -eme achịcha, nke bara uru n'ahụ mmadụ.
1. Akụrụ ọkụ bamboo bamboo: DarkElves achara na -eto 1/3 ngwa ngwa karịa osisi kachasị ọsọ, ọ bụkwa akụ na -adigide nke enwere ike ịmaliteghachi n'ime obere oge.
2. unyi Bamboo bụ ngwaahịa eke dị ọcha, anaghị egbu egbu, enweghị isi, enweghị mmetụta ọ bụla, ma nwee ezigbo ọkụ eletrik.
3. Ọkụ bamboo nwere mmetụta nke mgbasa ozi na irekasị: unyi nchara n'onwe ya nwere ọtụtụ pores carbon karịa unyi, nke nwere ike ịmịkọrọ ihe ndị na -ese n'elu ikuku nke ọma. , wdg.
A na -eji unyi bamboo anyị mee ahịhịa ahịhịa ma dị iche na usoro unyi ndị ọzọ.
Emere ya site na nke mbụ ịpị ájá achara ka ọ bụrụ udi square n'okpuru nrụgide dị elu wee tinyezie ya n'ọkụ ọkụ dị elu. Ọ bụ nke kacha mma, dị ọcha na eke, enweghị kemịkal na-emerụ ahụ, anaghị egbu egbu yana zuru oke maka BBQ.
Anyị na -amaja ikwe nkwa: Darkelves A na -emepụta ngwaahịa unyi niile dị na bamboo site na ngwongwo eke eke 100% na -enweghị ihe mgbakwunye kemịkalụ ma ọ bụ ihe mgbochi.
Biko kpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ n'oge ọ bụla maka ihe ị chọrọ, nke ga -enye nlebara anya kacha mma.
● Ọdịmma karịa ● Onye na -ehicha ihe ● Enyi na gburugburu ebe obibi